PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - UMpumi ubhorwa wuthando
UMpumi ubhorwa wuthando
Ilanga - 2018-11-29 - News - SANDILE MAKHOBA [email protected]
AKATHEMBELE emculweni kuphela uMpumi (Nompumelelo Mzobe), wengoma yodumo esihloko sithi "Somandla". Lo mculi onethalente eliyisimanga uthi umculo ungezinye zezinto aphila ngazo kodwa unomsebenzi awufundele awenza nsuku zonke. UMpumi usebenzela inhlangano enkulu esakaza ngomoya i-SABC, uyi-Sound Mixer.
Lo msebenzi uthi wawufundela eDurban University of Technology (DUT) lapho owayenza khona iVideo Technology. Ukuqhuba kwakhe izifundo aze aphothule akuzange kube lula njengoba kunesikhathi lapho wake waphoqeleka ukuba ashiye phakathi ahambe eyosebenza ukuze ezothola imali yokuqhubeka nezifundo.
Enkulumeni yakhe ekhethekile neLANGA, uveze ukuthi ekhaya bakhuliswa ngunina ngokwakhe njengoba uyise wabo washona besebancane. Le ntokazi izalelwe eNdwedwe kodwa yakhulela eNtuzuma yaze yaphothula izifundo zikamatikuletsheni ePhembisizwe High School khona eNtuzuma.
Ngemuva kokuphumelela umatikuletsheni ibe isiyongena kulesi sikhungo semfundo ephakeme (DUT).
“Ngaphazamiseka ngisafunde unyaka owodwa kwamele ngiphume ngiyofuna umsebenzi ukuze ngikwazi ukuqhubeka nezifundo zami, yilapho engaya khona esikoleni sikaMbongeni Ngema, iMbongeni Ngema's Academy, ngafunda indlamu, ukucula, ukulingisa kanye nokudansa,” esho.
Ngemuva kwalokho uthi wakwazi ukuthola imali yokuqhubeka nezifundo zakhe eDUT kanti nonina yayikhona enye imali owayeseyihlanganisile. Ngemuva kokuphothula izifundo wathola umsebenzi e-SABC engakabi umculi owaziwayo.
“Ngaleso sikhathi ngangisaziculela ngezimpelasonto uma ngingasebenzi. Ngo-2013 ngenza ingoma noHeavy K esihloko sithi "Wena", yilapho-ke okwaqala khona udumo lwami,” esho. Uthi umculo awukaze umphazamise emsebenzini ngoba isikhathi sakhe usihlela kahle.
Ukungabi naye umuntu othandana naye uthi kungezinye zezinto ezimenza akwazi ukwenza yonke into ephathelene nomsebenzi.
“Uthando luyangibhora nje, awucabange uma nginomuntu kuzomele ngimchazele ukuthi ngiphume emsebenzini ngaya kuphi. Uthando lunabantu balo abalulungele. Nakimi siyofika leso sikhathi uma uNkulunkulu esengikhombele umuntu, okwamanje ngisasebenza.”
Uthi uma ephuma emsebenzini uya ehhovisi lakhe e-Ingoma Republic, aphume lapho aye ejimini ayozilolonga. Kwesinye isikhathi uye aye lapho kuqoshwa khona, ekhaya aze afike phakathi kwamabili - yikhona konke lokho akhala ngokuthi kungaba yinkinga uma esothandweni.
Ukujabulela kakhulu ukusebenza noHeavy K kanye noProfessor, uthi yibona abantu akholelwa ukuthi bamkhulisile emculweni.
“UHeavy K imimoya yethu iyazwana, uma sisebenza naye siyashesha ukufika esiphethweni sengoma, kanti uProfessor ngiyasola ukuthi kuzwana idlozi ngoba ingoma engiyenze naye yashesha ukuduma futhi yahlala isikhathi eside ezindlebeni zabantu,” kulanda yena.
Utusa uProfessor ngokuthi umsebenzi uwenza ngokucophelela, okwenza umuntu akhululeke uma esebenza naye.
“Ithalente lakhe liyisimanga ngoba uyabhala, uyacula aphinde akwazi ukuciphiza izinkinobho. Uma ngimnikeze ingoma uvele angene khaxa kuyona,” kusho uMpumi. UMpumi ungomunye wabesifazane abathathwa njengabahamba phambili endimeni yomculo. Wazakhela udumo ngengoma yakhe esihloko sithi “Somandla”, kube ngeyashisa izikhotha esihloko sithi “Umoya” ayenza noHeavy K, kuphinde kube ngethi “Ngize” apike kuyona uProfessor, angeke siyikhohlwe ayenza noDJ Euphonik esihloko sithi “Busa”, nezinye eziningi.
Njengamanje umatasa nengoma yakhe esihloko sithi “Shona Malanga”. Uthi ubezimisele ngokukhipha icwecwe eligcwele kulo nyaka kodwa kwagcina kungenzekanga, uthi usezokhipha ngonyaka ozayo.
Okumthokozisa kakhulu wukuthi ngemali yomculo kanye nayihola emsebenzini ukwazile ukushintsha impilo yakubo. UMpumi akanayo ingane, uthi akayijahile futhi uthokoziswa abashana bakhe abazalwa ngodadewabo.
“Ngiseyingane nje ekhaya, umama uyawuthela ummpentshisi (uyabhaxabulana ngenduku). Uma ngifuna ukuzula ngivele ngithi ngiyocula.”
Uthi uma emtshele ukuthi usayocula uyathamba (unina) ngoba uyazi ukuthi umculo wumsebenzi. UMpumi uyazifela ngojeqe nobhontshisi. Uthi uthanda ukudla okuphekwa isikhathi eside njengawo ubhontshisi kanye nesitambu.